Shiya akuwona nje amathuba okushisa i-sunbathe, ubone umhlaba, ugibele olwandle olufudumele kanye nesitokisi phezulu kumavithamini kuze kube sehlobo ezayo. Abazali, ukuvakasha komndeni olwandle olunomntwana nakho kuyithuba lokuzwa izinto eziningana ndawonye futhi bafunde ukuqonda kangcono.
Izingane ezisolwandle nolwandle
Ukuthatha ingane olwandle - ngakho abazali bahlela umsebenzi wabo oholide. Kungani? Ilanga lanikeza i-tan enhle ne-vitamin D; Umoya womoya ugcwele ion i-iodine yokwelapha; indawo engazijwayele - ukubonakala okusha. Ingabe kuyadingeka ingane?
Ngakolunye uhlangothi, izingane zilula kakhulu ukuvumelanisa ngaphezu kwabantu abadala. Ngakolunye uhlangothi, udinga kancane kakhulu: ubisi lomama, ubuthongo obuhle nokuthokoza okujabulisayo kwabantu abadala. Kodwa ngalokhu eholidini kungenzeka kube yinkinga.
Odokotela abancoma ukuthi bathathe izingane ezingaphansi kweminyaka emithathu ukuphumula kwenye indawo yezulu. Omanzini abakwazi: Amanzi anosawoti angabangela ukucasuka kwesikhumba esibucayi, kanye namagagasi angase asabise i-crumb.
Ukushona umntwana, ikakhulukazi umntwana, futhi akunakwenzeka ngesikhathi sokuvakasha komndeni olwandle nomntwana. Ngalo kanye nasezindleleni zethu kungenziwa imizuzu embalwa elangeni, bese kuphela ekuseni, ngaphambi kokuba kuphekwe emini. Sekuyisikhathi eside kusungulwe ukuthi izifo zesikhumba ezinonya lapho sezikhulile zihlobene ngokuqondile nokushiswa kwelanga ezitholakala ebuntwaneni.
Kukhona ichibi elinamanzi ahloswe ngobungcweti obunzima, izindawo zokudlala zezingane, ezithatha iminyaka engu-2-3 nje kuphela, kanye nokuvakashela ezikhangayo zendawo.
Ehlobo, izingane, ngokuzumayo zishukunyiswa ukuthanda kwabazali bazo ezifundeni ezifudumele zeholide lomndeni olwandle olunomntwana, ubunzima bokuzibandakanya akuyona into embi kakhulu ebusika lapho bewa yiqhwa kuze kube sekushiseni. Kodwa nokho izinga lokushisa eliphakeme ngokungavamile, futhi ngisho nobunzima endleleni eya eningizimu, bazizwa bazizwa. Okumangalisa ukuthi, yizingane ezisetshenziselwa ukubhekana nezimo ezintsha, ikakhulukazi uma isimiso sabo sezinsuku zonke nokudla kungashintshi. Futhi uma umama engazivumeli ukuba athathe i-raznosolami yendawo, ukunambitheka kobisi lwakhe ngamaphuphu kusahlala okufanayo, ngakho-ke, cishe ngeke kube nezinkinga ngesisu somntwana. Futhi ngoba iholidi lizophela njengomkhawulo kunina, kuzomele lilamukele.
Izingane ezineminyaka engu-3-4 ubudala zivumelane nezinguquko kancane kancane, naphezu kokuthi le minyaka ibhekwa njengeyona efanelekile kakhulu ohambweni lokuqala olwandle. Futhi ukuthutha / ukushayela okuvela esimweni sezulu esibandayo kuya ekudleni okushisayo kuhle kakhulu, kepha uma ubuya kusukela emaphethelweni aphezulu "ezinyoni ezifudukayo" kubanda ukulinda. Ukugwema lokhu, kufanele uhambisane nemibandela eminingi. Hlela iholide lakho ukuze izingane ezincane zichithe olwandle zingaphansi kwezingu-3, ​​futhi mhlawumbe amasonto amabili noma amathathu. Uma ingane isifo sofuzo, ungayibuyisi kusukela olwandle ezinyangeni ezingaphansi kwezinyanga ezimbili.
Ucwaningo lubonisa ukuthi izingane "ezisenyakatho" phakathi nokuphumula kwazo zigula okungenani kabili - lapho zifika olwandle nalapho zibuya kuwo. Ukushintsha isimo sezulu kungumthwalo omkhulu emzimbeni womntwana, futhi lezi zinkinga ezimbili kudingeka zihlanjululwe ngangokunokwenzeka ngesikhathi.
Ingane eneminyaka engu-5-6 ubudala isivele ihlangabezana nohlobo oluthile lokuzamazama, njengokuhamba okude. Yiqiniso, kulokhu futhi kungenangqondo ukuyithatha kwenye indawo ekupheleni komhlaba, kodwa izindawo zokungcebeleka zasolwandle eziseduze ziyozuza kuphela. Ngeke nje athukuthele futhi afunde ukugebha - ngalesi sikhathi uyakwazi ukwazi umhlaba omzungezile ngezinga elihluke ngokuphelele: wonke ama-horizons avulekile kuye. Ngakho-ke, uhlelo lweminyaka emihlanu, ngokungafani nomfowabo omncane, ngeke athole injabulo nje kuphela engxoxweni yesihlabathi, kodwa futhi ekukhulumisaneni nabantu, kusukela olimini olungajwayelekile, kusuka emdlalweni omusha. Ngalesi sikhathi ingane ingakwazi ukwenza inkampani kubazali ngezihambeli futhi ngesikhathi esifanayo ngeke kube umthwalo.
Abanye abazali bahamba ngobuqili: esikhundleni sokubhukuda olwandle amasonto ambalwa, baqasha indawo yokuhlala ogwini isikhathi eside, bebambisana namanye amama nobaba, bahlala olwandle kanye nezingane zabo, inqubo isetshenziswa yibo bonke: ugogo, ama-nannies, abaseduze izihlobo ezikude nezingane zabo. Iholide elinjalo - ehlathini kanye ne-wholesale - itholakala isabelomali ngempela.
Kukhona enye indlela yokwehlisa imvelo: ukunciphisa uhambo. Uma ukuphuma okuseningizimu kuthatha izinsuku ezintathu, umzimba awunayo isikhathi sokuhamba kuwo wonke umjikelezo wokugcizelela, futhi ukubuyela ekhaya ngeke kube nobuhlungu. Kodwa empeleni, ngempelasonto olwandle, ngisho nangomntwana omncane ezandleni zakhe, futhi angaphumuli nhlobo. Ngaphezu kwalokho, ingane ihlale inethuba lokuthatha noma yiliphi igciwane noma ukutheleleka esikhumulweni sezindiza, ihhotela, indiza, okungukuthi, ezindaweni zabantu abaningi, Ukuguqulwa kwezihlalo - kungakhathaliseki ukuthi isikhathi esifushane - ngokushesha kuthinta sha. Lesi yisiko sehlobo lwami ehlobo, ukushisa okuzungezile, umzimba wethu udinga ukupholisa, futhi ezinganeni izinqubo ze-thermoregulation zisalokhu zibuthakathaka, futhi lezo zindlela ezivame ukungena nokugaya ukudla, manje ziqondiswe ukulwa nokushisa. Kodwa ehlobo, izingane zidla kancane, kodwa ziphuza ngaphezulu. Le nkinga ingaba yinkomba: phakathi kwezidlo ezingavamile, kungcono ukunqaba ukuvuselelwa futhi. Kodwa abazali, besaba ngenxa yokuntuleka kwengane, bazama ukufaka into eminyameni, hhayi njalo into ewusizo futhi ngesikhathi esifanele.
Ezweni, ehlane ...
I-dacha noma indlu yendawo emzaneni ophakathi, uma kuqhathaniswa ne-resort yasolwandle, inezinzuzo eziningana.
Ayikho imikhawulo yobudala. Uma indlu okungenani ikhululekile kancane, umntwana angasuswa edolobheni kakade kusukela enyangeni ubudala. Linda iminyaka embalwa ngeke kudingeke.
Isimo sezulu esingokwesiko
Emadolobheni amadala ezinsukwini zokuqala emoyeni omuhle wehlobo ikhanda liyakwazi ukuguqulwa, futhi kubahlali abancane behlobo elishintsha izimo azithinte nganoma iyiphi indlela. Kuqinisekisiwe ukuthi ngeke kube khona ukuhluleka kwama-biorhythms kusukela ekushintsheni kwezinkathi zesikhathi, noma ubunzima bokuzibandakanya.
Yiqiniso, kungase kube ukutholakala ukuthi izaqathe namakhukhamba zikhula embhedeni, hhayi eshalofini esitolo, kodwa ngesikhathi esifanayo akukho ushintsho olukhulu ekudleni - ngaphandle kokuthi, "esidla embhedeni," ingane ithola amavithamini amaningi.
E-dacha ungafika okungenani lonke ihlobo, ngisho nangempelasonto - ngeke kube khona izinkinga kunoma yikuphi.
Ngokuvamile, ngokuhlela kahle kwezokuzilibazisa kuleli lizwe, ihlobo lizokwenza ingane ibe yinto yokujabula, iqinise amandla akhe nempilo, isize ukuhlanza umzimba nokugcina amavithamini ngonyaka ozayo, futhi unikeze okuhlangenwe nakho okujabulisayo okuningi. Kodwa ngendlela engalungile, i-dacha iyakwazi ukuphenduka ekhoneni lasezulwini ibe yindawo yokudingiswa.
Endlini yezwe, udinga ukuzihlinzekela wena nabantwana, okungenani induduzo encane - kokubili ngokomzimba nangokwengqondo - ukuze iholidi ingabi umzabalazo wokugcina.
Ubusuku buhle kakhulu, ikakhulukazi ekuqaleni kwehlobo. Uma indlu ingashisi, gcina i-heater kagesi kanye ne-heat pad - uyibeke embhedeni wengane yakho. Qinisekisa ukuthi indlu inezingubo kanye nezingubo ezifudumele.
Nikeza ukuxhumana ne "Umhlaba Omkhulu"
Uma uhlala endaweni ephephile, cabanga ngendlela ingane emele ngayo izothola ukunakekelwa kwezokwelapha.
Uhambo oluya e-dacha nezingane luvivinyo olunzima kowesifazane ophoqeleka ukuhudula yena nendlu yakhe nezingane ngokwakhe. Ngakho-ke, umama kufanele ahleleke ngokuhleleka! Kufanelekile ukuxoxisana nezihlobo zokumthatha esikhundleni sakhe "emsebenzini" okungenani ngezimpelasonto bese kumnika ithuba lokuba "aziqhekeze" futhi alahle umusi: ahambe ehlathini, aye esitolo, futhi ekugcineni abe ne-nap.
Thola abangane bakho
I-brat ye-tomboy engu-2-5 ubudala kufanele ilahle amandla endaweni ethile. Ekhaya, wadlala egcekeni noma enkulisa nabangane bakhe, futhi manje lonke uchoko lwakhe luqondiswe kunina. Inkampani edolobhaneni inzima ukuthola kunokuba idolobha, kodwa kuyadingeka ukuyenza-okungenani ukuthula kwakho kwengqondo. Ngenhlanhla, ezimweni zasehlobo, ubungane buvela kalula ngisho phakathi kwezingane ezineminyaka ehlukene.
Okuhle kakhulu - Okubi
Yiziphi izinkinga ngokuvamile ezilindele ezweni? Uzoyidla ingane yamajikijolo angahlanjulwanga, iwele emgodini, ilimaze umlenze wakhe, omunye uzomluma. Zonke lezi zinkinga abazali bajwayele ukuzivikela kanjani: bafaka ucingo bese bephuza izimbobo lapho umcwaningi omncane ekwazi ukukhuphuka, ukuqoqa izipikili, ukubhubhisa amahlathi njengesikilasi, nokugcina izidakamizwa.
Kodwa akekho olindele ukuthi i-eco-friendly, ewusizo, evuthiwe futhi. okubaluleke kakhulu, ukuhlanza izipho zemvelo kungabangela ubuthi obungempela ngempela. Isibonelo, amajikijolo, ama-moms kanye namakhulukazi omkhulukazi azama ukondla umntwana ekugcineni, engacabangi ukuthi amavithamini (ngaphandle kwe-vitamin C) awaqoqi umzimba. Phakathi naleso sikhathi, cishe kungabonakali emehlweni omzali, amathambo amancane ama-strawberries angabangela ukucasuka okuqinile emathunjini futhi ngenxa yalokho - isifo esibucayi. Umthetho ulula: ngesikhathi ingane ingadla amajikijolo amaningi njengokwakheka (hhayi kumama!) Ewusizo.
Futhi, endleleni, iphathelene nemvelo entsha. Uma ifafazwa ngokukhululekile nge-parsley ne-dill ewusizo "isobho elihlaza", imiphumela yengane engaphansi kweminyaka emithathu ingaba mnandi kakhulu. Kungcono ukubilisa imifino neminye imifino.
Ukubaluleka nomona - kuhle noma kubi?
Indlela yokuhlanza imbobo yemboya yemvelo ekhaya
Imithetho yokunakekela ubucwebe
Yiziphi izinyathelo okumele zithathwe ukuze zivikeleke ekushiseni?
URamzan Kadyrov wanikela umkakhe ividiyo ethintekayo
Ukuzivocavoca ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuqeda iphunga elimnandi
Iresiphi yesitifiketi se-pistachio cheesecake ngoMashi 8
Ikhefu elimnandi kunazo zonke le-Easter ikhekhe - izindlela zokuhamba ngezinyathelo ezinezithombe namavidiyo
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngenkathi usebenzisa ibhayisikili yokuzivocavoca?
Uma indoda iphakamisa isandla phezu kowesifazane
Isidlo sasekuseni se-Apricot
Indlela yokubuyisela isikhumba ngemuva kwamaholide
U-Irena Karpa, uLyubko Deresh
Isaladi nge-apula nesipinashi